Ireo safidy roa tsara indrindra amin'ny Google+ ho an'ny Android | Androidsis
Google+ no tamba-jotra sosialin'ny G lehibe, izay indrisy fa tsy nahita fahombiazana izay antenaina hananana. Noho izany, ny 2 aprily no daty izay hitiavako azy hanidy ofisialy ny varavarany. Vaovao ratsy ho an'ireo mpampiasa nampiasa azy io. Mpampiasa sasany izay mbola manana andro vitsivitsy hidirana aminy ary miroso amin'ny ampidino ny angonao, alohan'ny tara loatra hanaovana izany.
Na dia tsy izany ihany no zavatra tokony hataon'izy ireo. Satria maro no terena mitadiava fomba hafa hanoloana Google+. Nefa maro amin'izy ireo no tsy te hitodika any amin'ireo tambajotra sosialy iraisana toy ny Facebook na Instagram. Na mety efa manana kaonty momba izany izy ireo, saingy mila safidy hafa.
Soa ihany, manana safidy vitsivitsy azo atao isika amin'ity lafiny ity, hananana fidirana amin'ireo tambajotra sosialy hafa. Ka ireo mpampiasa Google+ mitady safidy hafa dia afaka mahita ny sasany amin'izy ireo. Ankoatr'izay, maro amin'izy ireo no manana ny fampiharana Android azy manokana, izay manamora kokoa ny fidirana amin'izy ireo.
Ireo vahaolana tsara indrindra amin'ny Google Inbox
Mety ho ilay safidy mahaliana indrindra ho an'ny mpampiasa Google+. Indrindra ho an'ireo izay tsy te handalo ny fanakatonana tambajotra sosialy indray. Amin'ity lafiny ity, Mastodon dia tambajotra sosialy tena miavaka, izay no nanampy azy handresy mpampiasa marobe eran-tany, efa manakaiky ny roa tapitrisa. Satria isika miatrika tambajotra sosialy itsinjaram-pahefana izahay. Ka ny mpampiasa tsirairay dia afaka mamorona node server azy manokana ao.
Ny zava-misy fa tsy tambajotra sosialy nentim-paharazana dia zavatra manome fahalalahana betsaka. Satria ny mpizara tsirairay dia ho afaka hanana fitsipika sy fampiasa amin'ny fampiasana azy. Ka ireo mpampiasa izay maniry toerana ahafahan'izy ireo maneho ny heviny nefa tsy misy karazana sivana, dia afaka manana mpizara azy manokana ao anatiny, mba hiadian-kevitra amin'ny olon-kafa. Tsy misy fisalasalana, zavatra iray izay manome fahafaha-manao betsaka, ary koa mahaliana ny mpampiasa Android.
Ny interface Mastodon dia mitovy be amin'ny Twitter, mba tsy hanananao olana rehefa mampiasa azy. Samy manana kinova birao sy fampiharana Android momba izany izahay. Azonao atao ny miditra amin'ny fotoana rehetra amin'ny fomba tsotra. Safidy mahaliana indrindra amin'ny Google+, ahafahanao manana ny mpizara anao ao aminy. Maimaimpoana tanteraka ny fampidinana ny app amin'ny Android. Azo sintonina mivantana avy ao amin'ny Play Store etsy ambany:
Tusky ho an'i Mastodon
Developer: Lapa tsy misy keyty
Faharoa, manana tamba-jotra sosialy hafa izahay izay mety toa ny sasany aminareo. Izy io dia aseho ho safidy hafa tsara ho an'ny mpampiasa Google+. Amin'ity tranga ity dia miatrika tambajotra sosialy izahay izay mifantoka mazava tsara amin'ny tsiambaratelon'ny mpampiasa. Zavatra iray izay azo antoka fa manome lanja ny maro amin'ny fomba tsara. Satria tsy manana doka na fanangonana angon-drakitra ao anatiny isika, toy ny mitranga amin'ny tambajotra sosialy hafa toa ny Facebook na Instagram. Noho izany, mety hahaliana ny maro kokoa izy io.
Safidy 5 hafa amin'ny Google Play Store
MeWe dia tambajotra sosialy izay ahitantsika vondrona maro, izay mizara telo matetika. Etsy ankilany, ny an'ny tsy miankina, izay tsy maintsy ananananao fanasana, mifantina (raha ilaina ny fankatoavana) na ireo vondrom-bahoaka misy fidirana malalaka. Ao amin'ireto vondrona ireto dia manana asa mitovy amin'ny an'ny Google+ izahay, toy ny faribolana, fanangonana ary maro hafa. Ankoatr'izay, ao amin'ireo vondrona chat ireo dia misy ihany koa ny fanohanana antso an-tsary sy feo. Safidy tsara hafa.
Izy io dia manana endrika somary tsotra ampiasaina, izay tsy isalasalana fa mamela antsika hampiasa azy io amin'ny fotoana rehetra. Toy ny tamin'ny tranga teo aloha, isika dia samy manana kinova desktop na fampiharana Android momba azy. Ka ny fomba roa dia azo ampiasaina hidirana ao. Ny rindranasa amin'ny Android dia azo sintonina maimaim-poana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny safidy tsara indrindra amin'ny Google+ ho an'ny Android
Ofisialy: Ny andian-tsarin'i Galaxy S10 an'ny Samsung dia hahazo fanohanana haingana 25W